यो लेख पहिलोपोस्ट मा जेष्ठ ९ गते २०७३ (२२ मे २०१६ ) मा "ओलीको सपना" सिर्सकमा प्रकासित् थियो । Find it here: http://www.pahilopost.com/blgs/view/-10.html
रबिन्द्र अधिकारी, बनेपा
दिनानुदिन उन्कै शब्दमा 'इन्भर्टेड बुद्धीजिबि'हरुको ठाडो खन्डन र उपहासका पात्र बनेका नेपालका बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दैनिक अखबारका हेड्लाइन देखी कार्टुन र मध्यप्रिस्ठका बिस्लेशणात्मक पानामा समेत् चौपट्टै सँग छाउन सफल भएका देखिन्छन । हुनत प्रधानमन्त्री भनेका चर्चित नै हुनुपर्छ, डेली पत्रीकामा नआए के प्रधानमन्त्री? म ओली को बिरोधि हैन, रचनात्मक आलोचना गर्ने मान्छे बरु बढी मित्रु हुँं । ओली एक ब्यक्ती जो सुप्रिम पावरमा छन उन्को आलोचना हो यो । ओली जो एक पार्टिका नेता हुन, उन्को आलोचना हैन ।
भर्खरै सार्वजनिक भईरहेका उन्का नबिनतम भनाइहरु प्रती प्रायले मज्जैसँग खिल्ली उडाए, अरुले हो मा हो थपे अनी अरु धेरैले गमेर हासे, ताली बजाए । अर्का धारका ब्यक्तिहरु जस्ले ओलीका कुनै पनि बोली अपरिपक्व छैनन भन्न कहिलै छुटाएनन । जताततै निराशाका बादल मडारिइरहेको नेपालका आकाशमा ओलीको आशारुपी 'सौर्य'बोली उदाउनुलाई 'अप्टिमिजम'को संज्ञा दिए उनिहरुले । सपना देख्न सबैलाई छुट छ र संसारका कुनै पनि बिकसित् देश बिना सपना तेत्तिकै सम्रिध्ध भएका हैनन भन्ने उनिहरुको तर्क पनि सापेक्ष नै लाग्दछन ।
सपना देख्नु तर के सबै सपना अरुलाई बाड्नु पर्छ ? देखेका सबै सपना पुरा हुँदैन भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ भने किन सुनाउदै हिंड्नु? पहिलो कुरो जिम्मेवार ब्यक्तिले सपना देखेर बस्ने हैन योजना ल्याउने, खाका प्रस्तुत गर्ने, युद्ध स्तरमा कार्यन्वयन गर्ने अनी अन्त्यमा आएर भन्ने ‘मैले यो सपना यती अघी यसरी देखेको थिए, आज आएर साकार भयो’ । हिजो घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोड्ने सपना देखाएर फेरी अर्को सपना देख्नलाई सुत्न भनेर हिंडेका ओली सखारै पानी जहाजको सपना बाड्न अाइपुगे । उनिमा निर्दोश बालकमा हुने गुण छ - ढाट्न नसक्नु र पेट्मा कुरा राख्न नसक्नु । अर्थात उन्को रुद्रघन्टिमा सेन्सरशिप फिल्टर इन्स्टल गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।
सपनाको बहुत काइदा मध्य एक हो- सपना देख्न पैसा पर्दैन । तसर्थ सित्तैमा देख्न पाइने सपनामा किन कन्जुस्याइ ? पानीजहाज मात्र किन? देखी सकेपछी ठुलै सपना देखौ- अन्तरिक्षमा नेपाल स्पेस स्टेसन बनाउ , पम्प्किन कि जस्ता पचासौ लग्जरी टापु किनौ, हिमालमा यारसागुम्बाको ब्यबसायिक खेती सुरु गरी विश्वाका सबै देशमा प्याकिङ र सप्लाइका कम्पनी खोलौ, सामुद्रिक न्याभी नै खडा गरौ, आदी आदी ।
अब सपनाबाट आशा तर्फ लागौ । आशावादी हुनुपर्छ, देश बनेको हेर्न कस्लाई मन छैन? खुट्टा टेक्ने ठाउको धरातल हेर्यो भने कहालीलाग्दो छ अझ चन्द्र छुने कल्पनाले मान्छे कहिले सम्म बाँच्न सक्ला? के सम्भव छैन? ओली ले बोलेका सब सम्भव छन तर कहिले सम्भव छन? दस बर्ष, बीस बर्ष कती बर्ष कती? तोकेरै भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । भबिस्यको कुरा गरेर आखिर फाईदा पनि त छैन, अनी प्रधानमन्त्री को जागिर कसैको बिर्ता पनि त हैन सधैंभरी खाइरहनलाई ।
ओलीले कामको नाममा सिन्को समेत् भाचेका छैनन भनेर मैले भन्न खोजेको हैन । उन्ले संघिन घडिमा प्रधानमन्त्रित्वको पद धारण् गरी थुप्रै चुनौतीहरु खेप्नु पर्‍यो । भारतसँग पन्जा लडाईंमा जितेर मधेसी आन्दोलनलाई समेत् तुहाउन उनी सफल भए । भारतको इच्छा बिपरित धेरै निर्णय लिइ चीनसँग सम्बन्ध बढाइरहे । उन्का राम्रा कामका कदर गर्दै नराम्रा कुरालाई औंला त ठड्याउन पाईन्छ होला नि? हो पाइं भन्दैमा बेपत्तै सँग बोल्नु उन्को बैगुन नै हो । यो कुरा उन्का समर्थकहरु बरु कुस्ती खेल्न तयार हुन्छन मान्दैनन । बोलीले नै मान्छेलाई अन्धभक्त बनाइराख्नु पनि उन्को खुबी हो, स्विकार्नै पर्छ ।
एक अरब पर्ने पानी जहाज नेपालसँग हुनै नसक्ने कसैले भनेको छैन । हो भूपरिबेस्टितनै भए पनि स्विजर्ल्यान्ड र लग्जेम्बर्ग धेरै सम्ब्रिद्ध छन, उनिहरुसँग पानी जहाज पनि छ । पानी जहाज स्वामित्व हुनलाई समुद्र जोडीएको कुनै एक देशको डक प्रयोग गर्नु पर्छ र सहजता को झन्डा भन्ने आचारसम्हिता पालना गर्नु पर्छ । त्यस्मा जुन देशमा पानी जहाज रजिस्टर गरिएको हो अन्तररास्ट्रिय पानीमा रहदा तेइ देशको झन्डा उक्त पानीजहाजमा फहराउनु पर्छ । हो, प्यासिफिकमा फहराए पनि एट्लान्टिकमा फहराए पनि ठुलो झन्डा त आखिर होस्ट कन्ट्रीकै हुन्छ । सबै नियमहरु रजिस्टर गरिएको देशको पालना गर्नु पर्छ र यदी कुनै घटना घटेमा सोही देश सामुद्रिक कानुनको दाहेरामा आउनु पर्छ । यस्का लागि वार्षिक महसुलत 'होस्ट कन्ट्री' लाई तिर्नै पर्‍यो । भारतले चाहयो भने बिभिन्न बहानबाजीमा पारबहन सन्धिकै उपेक्षा गरेर नाका बन्द गर्न सक्छ भने कथित पानीजहाजबाट सामान अन्लोड गरी के समुद्र बाट चाँही सुरुङ खनेर डाइरेक्ट नेपाल आउने? पैसा तिर्यो भने पानी जहाज त आउँला तर के समुद्र नै भारत छिचोलेर आउने त हैन होला?
देशमा एउटा रुटमा सिन्डिकेट तोडेर सर्बसुलभ जनयातायात को ब्यबस्था गर्ने हुती बिकास गरेर मात्र अन्य यातायात रेल, पानीजहाज र रकेट को कुरा गर्दा हल्का पच्थ्यो कि? आँखा अगाडि जस्ता टहरामा जिबन गुजारिरहेका टुहुरा जनताका पिताले यस्ता हास्यास्पद उक्ती दिदै हिंड्नु भन्दा तत्काल गर्नै पर्ने कामहरु गरिहाल्दा बरु हाइट अझ बढ्ला । खानिको अन्वेसण् सुरु वात मात्र गर्दा पनि पेट्रोलको ग्यारेन्टि लिने ओलीलाई के थाहा दुई बर्षमा अब कती वटा प्रधानमन्त्री फेरिने हुन भनेर ।